Abaqeshi kunye neeBrand-OutBüro
Masiqale ngezibalo ezisekwe kuphando:
I-98% yeenkokheli Ndicinga Abasebenzi baziva ukuba inkampani yabo ibandakanyiwe.
I-80% yabasebenzi ichaza ukuba baziva bebandakanyiwe kwiindawo abasebenza kuzo. Lo mahluko ukufutshane wama-20% ubizwa ngokuba “sisithuba sokuqonda”.
I-50% yabasebenzi abakhoyo ngoku bafuna ukuba abaqeshi babo benze okungakumbi ukwandisa iyantlukwano kunye noluntu.
I-84% ingakuthathela ingqalelo ukushiya umsebenzi ngoku ukuba ifumene umsebenzi kwinkampani enegama elihle.
Ngama-69% abantu abafuna umsebenzi abanokuyeka ukwamkela umsebenzi kwinkampani enegama elibi, nokuba bebengasebenzi.
I-68% yabo bantu batshintshayo "bayekile" endaweni yokudendwa. Oko kuthetha ukuba abasebenzi baya behamba-hamba ngakumbi, beshiya iinkampani zixakekile zizalisa izithuba ezingenabantu. Kwaye khumbula: yonke ingeniso yabasebenzi ixabisa inkampani malunga neenyanga ezi-6 ukuya kwezi-9 zomvuzo wabasebenzi. Ukufumana i-60,000 yeedola / isikhundla sonyaka, ilahleko eyi- $ 45,000
Ireyithi yengeniso yonyaka yabasebenzi base-US kwi-2020 yayiyi-45%.
Ama-67% abantu abafuna umsebenzi bajonga iyantlukwano njengento ebalulekileyo xa bejonga amathuba engqesho.
I-57% yabagqatswa abafanelekileyo bacofa kude kwibhodi yakho yomsebenzi ukuba ulwazi olunamandla lwe-DEI alufumaneki lula.
Ama-29% abantu baseMelika abangaphantsi kweminyaka engama-30 ubudala abachonga njengabantu besini esahlukileyo banamava esini esifanayo.
46% LGBTQ + Abasebenzi bahlala bevalekile ngenxa yokoyika ucalucalulo kunye / okanye ukuxhatshazwa. Eli nani alitshintshanga kwaphela kule minyaka ilishumi idlulileyo.
26% LGBTAbasebenzi be-Q + abazivalele emsebenzini banqwenela ukuba baphume, bakhuseleke kwaye bamkelwe.
I-15% yabasetyhini be-LBTQ + bakholelwa ekubeni ukuthanda kwabo ngokwesondo kuya kuchaphazela kakubi inkqubela phambili yabo emsebenzini.
I-30% yamadoda e-GBTQ + akholelwa ukuba inkanuko yesini eya kuyichaphazela kakubi inkqubela phambili yabo emsebenzini.
Ngo-2025, iwaka leminyaka liza kubakho ngaphezulu kwesithathu kwisine sabasebenzi baseMelika. I-Millennials inovelwano kwimicimbi ye-DEI kwaye ifuna ukusebenza apho wonke umntu enexabiso khona kwaye apho aziva kamnandi ngomqeshi wakhe.
31% LGBTAbasebenzi be-Q + bathi baziva bengonwabanga okanye benxunguphele emsebenzini ngenxa yokungaziva bamkelekile, babandakanyiwe, okanye bakhuselekile.
53% LGBTAbasebenzi be-Q + baxela ukuva iziqhulo malunga nabantu abathandana nabathandana nabathandana nabantu abathandanayo nabathandana nabathandana nabathandana nabathandana nabo, okungenani kube kanye.
20% LGBTAbasebenzi be-Q + baxela ukuba baxelelwe okanye banabasebenza nabo bathetha ukuba banxibe ngendlela yobufazi okanye yobudoda.
I-59% yezinto ezingezizoLGBTAbasebenzi be-Q kuluhlu lwamacandelo emisebenzi bathi bacinga ukuba ayibobuchule ukuthetha malunga nokuzibandakanya kwezesondo kunye nokuzazisa ngokwesini kwindawo yokusebenza, nangona ngokwabo benika ingxelo bahlala bethetha ngezi zifundo ngencoko yemihla ngemihla malunga nabantu abatshatileyo, iintsapho kunye nobomi ngaphandle. zomsebenzi.
56% LGBT Abantu abadala baxele ukuba bona okanye umntu abamaziyo baphulukene nomsebenzi ngexesha lobhubhane xa kuthelekiswa ne-44% yabangengaboLGBT abadala
Iipesenti ezingama-35 baqeshiwe LGBTUlutsha lwe-Q (13-24 yo) olunamava ocalucalulo emsebenzini, ngamaxabiso aphezulu kakhulu axelwe ngabaphambukeli kunye nolutsha olungafakwanga ibhanari.
LGBTQ Ukufikelela kwiMithombo yeendaba
Amalungu eSayithi ye-OutBüro
I-OutBüro kumalungu aDibeneyo
33,500 - eUnited States
3,700 - eUnited Kingdom
1,100 - e-Australia
4,200 -umsebenzi kwiTekhnoloji yoLwazi, kwiSoftware, kwiMithombo yeendaba kwi-Intanethi
2,500 -umsebenzi kwezononophelo lwempilo, amayeza, kunye noxubo mayeza
IBhodi yoMsebenzi ka-OutBüro
Ibhodi yethu yomsebenzi ivumela umbutho wakho ukuba ujolise LGBTQ + abaviwa abasebenzayo nabangacacanga. Ukuba lilungu lombutho we-OutBüro unemisebenzi yokuthumela njengenxalenye yeephakeji ezininzi kwaye ukuba unqwenela ukuthumela umsebenzi omnye. Nazi ezinye zeenkcukacha manani zokuqhubeka kwakhona okwangoku kwiqonga lebhodi yomsebenzi.
Umlawuli / Umphathi wabasebenzi - 41.9%
Amava (angenguye umphathi) -22.6%
Abaphathi (VP, SVP, iNtloko yeSebe, njl. Njl.) - 16.1%
Umfundi (ophumelele izidanga) - 3.23%
Isigqeba soLawulo (i-CEO, i-CIO, i-CFO, njl. Njl.) - 3.23%
Isidanga se-Bachelor - 51.6%
Ezinye iikholeji - 9.68%
Ugqirha - 6.45%
Umsebenzi - 6.45%
Isikolo samabanga aphakamileyo - 3.23%
IsiDanga sokudibana - 3.23%
Abanye abaphumelele izidanga-3.23%
Ibango / Yongeza eyakho LGBTUluhlu loMqeshi wokuPhawula uMqeshi kwi-OutBüro
LGBTUmsebenzi Q abafuna musa ukujonga imisebenzi ngendlela efanayoLGBTQ abantu bayayenza. Nantsi indlela esinceda ngayo.
Yabelana ngebali lenkampani yakho kunye nabaphulaphuli bethu abanamava LGBTQ abafuna umsebenzi.
Uvavanyo lwasimahla lweentsuku ezingama-45
Ishedyuli 30-Min Intshayelelo Incoko
LGBTQ Ukuphawula uMqeshi
Gcina kunye nokutsala iTalente ephezulu
Ngaphandle kwesidingo sokwakha Uhlobo lomqeshi, uphononongo lubonisa ukuba akonelanga ukuba kwenziwe ukusetyenziswa kwamandla. A Uphando lwe-2019 Abaqeshi baseMelika abangama-688 baveze ukuba ngaphantsi kwesiqingatha seenkampani zinesicwangciso sokubeka uphawu kumqeshi. Ngaphezu komqeshi omnye kwaba-1 bathi "abaqinisekanga" ngokusebenza kweenzame zabo zokubeka uphawu. Okubi nangakumbi, iipesenti ezingama-5 bathi zange beva malunga nokufaka uphawu kumqeshi! Jonga eyethu Umxholo wokuPhawula koMqeshi. Ukufumana ukufunyanwa kwetalente ukhuphiswano lokutsala kunye nokugcina iitalente eziphezulu usebenzisa i-OutBüro Umqeshi ukuBhenca isuti yeenkonzo.
Ukulingana yinto elungileyo ukuyenza kwaye inkulu kumgca wakho osezantsi
Izifundo zibonisa ukuba xa olu lwazi lungafumaneki ngokulula iipesenti ezingama-57 zabaviwa abafanelekileyo bacofa kude.
Ukuqaqambisa kunye nobungqina boluntu yakho LGBTImigaqo-nkqubo enobubele kunye neenzuzo. Nokuba zizibonelelo zamaqabane asekhaya, ukhathalelo lwempilo ye-transgender, imigaqo-nkqubo yekhefu yosapho engathathi cala, okanye indawo yangasese engathathi cala ngokwesini, gqabaza imigaqo-nkqubo, iinkqubo kunye nezibonelelo ezibhenela LGBTQ abasebenzi.
Imigaqo-nkqubo yeNkampani kunye neziBonelelo
Bonisa LGBTIimodeli zeNdima kunye nokuBandakanyeka
Yiya phambili, uBukhulu bakho
70% LGBTQ abafuna umsebenzi bafuna ukwazi ukuba inkampani inayo LGBTIinkokeli ze-Q, abacebisi, kunye nokuthatha inxaxheba koluntu. Sebenzisa eyakho Umqeshi we-OutBüro Iprofayile yokubonisa LGBTQ, yabelana ngezinto ezingenzi nzuzo kunye LGBTAmashishini angabanini baka-Q obaxhasayo, yabelana ngemisebenzi yakho LGBTQ Iqela labaXhasi baBasebenzi lenza, babelane ngamabali empumelelo yomqeshwa, kunye nokunye ukunceda LGBTAbagqatswa be-Q bacinga ukusebenza nawe.
Nxibelelana ngokuqinisekileyo neyakho Uhlobo lomqeshi ibali. Sinokukunceda ukuba uphuhlise umxholo wesiko, amacebo, kunye neengcebiso zokukhetha ukubandakanyeka koluntu eziyilelwe kwaye zonyuselwa kwi LGBTItalente ye-Q ujonge ukuyitsala, iyabonwabisa abasebenzi abakhoyo ngoku, kwaye idala ukwazisa ngophawu kuluntu ngokubanzi. Konke ukusebenzisa izixhobo zakho ezingaphakathi endlwini, iqela lethu, kunye neengcebiso ezizodwa ngokusekwe kwiimfuno zakho, iinjongo kunye nohlahlo-lwabiwo mali kunye neqela lethu elizinikeleyo lenkxaso. Sinokude senze iinkqubo zokusebenza ngezindululo ezihlonipha iyantlukwano yabasebenzi kunye nabathengi.
Zisa iindlela zakho zoBomi
Gcwalisa imisebenzi yakho evulekileyo
Yiba ngumqeshi osebenzayo
Sebenzisa i-OutBüro yokufikelela kunye nokujolisa kuyo LGBTQ abafuna umsebenzi kunye non-LGBTAbagqatswa be-Q abalixabisileyo iyantlukwano kunye nokubandakanywa kwinkampani yakho izithuba zomsebenzi kwi-OutBüro. Lungiselela ukubonakala kwezikhundla zakho ezivulekileyo kunye nomgqatswa ojolise kuko okwahluka. Indawo yethu yokukhula yomgqatswa inokukhangelwa kwaye ifumane izilumkiso nge-imeyile ngokuqhubeka kwakhona okuhambelana neemfuno zakho. Qinisekisa ukuba ufaneleka ngakumbi LGBTAbagqatswa be-Q bayayibona kwaye bayisebenzise kwimisebenzi yakho evulekileyo edibene nesisombululo somqeshi wethu. LGBTI-Q Virtual Career Fairs iya kulandela kwi-ajenda. Yiba ngumamkeli kwangoko kwaye uncede ukuzisa ezi zinto zintsha ebomini.
E-OutBüro, siphuhlisa isifundo esibanzi sokwahlukahlukana. Ngokukhetha, t naliphi na inqaku ngentsebenziswano yakho, sinokuyikhuphela kubasebenzi bakho kunye / okanye kubathengi ngolwazi lwentlangano yakho. Isifundo sakho sinokulungelelaniswa ukungqinelana neenkxalabo zakho kunye neenjongo. Iziphumo zakho ziya kwabelwana nawe, xa kuthelekiswa neseti enkulu, kwaye emva koko zidityaniswe echibini lokufunda elikhulu. Akukho lwazi lichaziweyo ekwabelwana ngalo.
Yomeleza Ukwahluka Kwakho Kwinkonzo Yonikezelo
Phakamisa i-OutBüro ukunxibelelana nayo LGBTAmashishini aphethwe ngu-Q ukuba abe yinxalenye yenkqubo yomnikezeli ngeentlobo ezahlukeneyo zemveliso kunye neenkonzo zokuxhasa imisebenzi kunye nokukhula kwakho. Thatha inxaxheba kukwahluka koMnikezeli woMdlalo oDibeneyo.
LGBTAmashishini aphethwe ngu-Q akulo lonke ishishini onokucinga ngalo.
Fi kelela LGBTQ Amashishini Angabanini
Ngaba unikezela ngemveliso okanye iinkonzo kwaye ungathanda ukufikelela kwi LGBTQ oosomashishini njengethagethi abaphulaphuli? Fikelela kubo kwi-OutBüro.
akho LGBTQ iyantlukwano emsebenzini ibaluleke kakhulu kwi LGBTQ abathengi ngokungafaniyo nabanye abathengi.
LGBTQ Abasebenzisi Abafuni ukuThengisa okungenanto-Bafuna ukuthembeka.
Amandla okuthenga adityanisiweyo LGBT Abantu abadala e-US ngama-917 ezigidi zeedola kwaye benyuka! (Umthombo: Witeck Unxibelelwano 2016)
LGBT Amadoda nabasetyhini bachitha i-35% ngaphezulu kwexesha kwi-intanethi kunabo bafana nabo (Nielsen 2015)
LGBT Amakhaya enza i-10% ngaphezulu kohambo lokuya kuthenga kunekhaya eliqhelekileyo lase-US (Nielsen 2015)
Ezinye izixhobo ezongezelelweyo zomqeshi:
Ukwahluka kweGlassdoor kunye noPhononongo lwendawo yokuSebenza
indlela LGBTI-Q + yokuhamba koluntu kwindawo yokusebenza -McKinsey
Uphando olufutshane: LGBTQ Ulutsha eMsebenzini Iprojekthi kaTrevor
Ukuphunyezwa kwemigaqo-nkqubo eBandakanya wonke uMbutho weHlabathi -Harvard
Entsha LGBTUmsebenzi we-Q Ufikile-Iinkcubeko ezibandakanya wonke umntu kufuneka zilandele - BCG
Kaninzi LGBT Abantu bathi baphulukene nemisebenzi, iintlungu zempilo yengqondo ngexesha lesifo
Ukuphawulwa komqeshi: Ukufikelela LGBTQ Abaviwa
Iindlela ezili-14 zokuxhasa LGBT abasebenzi
LGBT Ukwahluka kunye nokubandakanywa: Inkampani yeZibonelelo, Abasebenzi kunye nabaThengi
LGBTQ Abathengi kunye nabaPhawu loMqeshi bayadityaniswa
LGBTQ Umqeshi obeka uphawu kwiQonga lokuPhawula LGBTQ Ukulingana kweQumrhu
I-96% ye-HR kunye nokuqesha iingcali zithi amava omsebenzi aya ebaluleke ngakumbi. Ukwahluka kunye nokubandakanya ukuqesha yeyona nto yamkelweyo ngeepesenti ezingama-78 zabalawuli bezabasebenzi kunye nabaqeshi abaphendula ukuba bajongana nokuqesha iitalente ezahlukeneyo, ngqo. Ngoba? Ewe, iinkampani ezingama-78% zibonise ukuba zibeka phambili iyantlukwano ukuphucula Inkcubeko, kwaye iipesenti ezingama-62 zenza njalo ukukhulisa ukusebenza kwemali. Ngelixa abaqeshi besilela ukunxibelelana ngexabiso lenkampani yokuqesha kwi-55% yexesha kwaye kuncinci kakhulu xa kufikwa LGBTQ abagqatswa.
Ngokutsho Ingxelo ye-2020 ye-LinkedIn yeTalente yeNdlela